पितृयज्ञ अर्थात महालय श्राद्ध – Chitwan Post
वैदिक सनातन धर्म संसारकै पहिलो एवम् जेठो धर्म भनेर विश्वले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ ।
वैदिक धर्म धर्ममात्र नभएर कलाकौशलले युक्त भएको ज्ञान–विज्ञानको खानी रहेको अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएर नै युरोप, अमेरिका, बेलायतलगायतका देशहरुले वैदिक संस्कृत शिक्षाको पठन–पाठनमा जोड दिएको अवस्था छ । जगतको सृष्टिकालदेखि नै वैदिक सनातन धर्मको प्रारम्भ भएको भनेर स्वयम् वेदको उद्घोष रहेको छ ।
गृहस्थीले गर्नुपर्ने यावत् कर्मको निरुपण पनि वेदले नै गरेको छ । तसर्थ वेदले निरुपण गरेको विधिविधान नियम बमोजिम गरिने नित्य–नैमित्तिक कर्म केवल सीमित कर्मकाण्डमात्र नभएर विज्ञानसम्मत रहेको छ । त्यसको तात्विक रहस्य बुझ्न नखोज्नु र बुझाउन नसक्नुको कारणले गर्दा नै आज कर्मकाण्डमाथि औँला ठड्याउने अवस्था आएको हुन सक्दछ ।
पितृयज्ञ अर्थात श्राद्धको विधान पनि वेदले नै निर्धारण गरेको पाइन्छ । पितृयज्ञ नित्य नैमितिक कर्मअन्तर्गत पर्ने कर्म हो । पितृयज्ञ गर्दा देवता, देवी, ऋषि, दिव्यपितृ, जीवित पितृ, स्वापितृ, मानव दानव पिशाच राक्षस, जलचर, थलचर पशुपक्षी अर्थात ब्रह्मादेखि बोट–वनस्पति जौ, धानका जरा र सम्पूर्ण भूत प्राणीलाई पक्षपात नगरीकन तर्पण पानी दिइने गरिएको छ । त्यसैले गर्दा यो वैदिक सनातन धर्म उदार, सदावहार एवम् सबै धर्म यसभित्र अटाउन सक्ने सहयोगी र सरल धर्मको रुपमा स्थापना हुँदै आएको छ ।
यो पर्व कहिले पर्दछ ?
हरेक वर्ष अश्विन कृष्णपक्षको प्रतिपदाबाट सुरू हुन्छ र औँसीमा गएर समाप्त हुन्छ । गणनामा १५ दिनमात्र हुने हुनाले अश्विन शुक्ल प्रतिपदा समेतलाई लिएर १६ दिन पुग्दछ । तसर्थ यस पर्वलाई पितृ पक्ष, अपरपक्ष, महालय श्राद्ध, सोह्र श्राद्ध भनेर पनि जानिन्छ । एउटा पितृको उद्देश्यले गरिने श्राद्ध एकोदिष्ट हो भने धेरै पितृको उद्देश्यले गरिने श्राद्धलाई महालयश्राद्ध भनिएको हो । यो पक्षमा नित्यकर्मबाहेक अरु देवीदेवताको आराधना निषेध गरिएको छ ।
पितृणांलोकमणि गच्छन्तु ये मृताःअन्यर्व १२÷२÷४६ मानिस मरेपछि पितृलोकमा जान्छन् । ‘अन्तर्हितो पितृलोकको मनुष्यलोकात्’ र तैतरीय १÷६÷८÷६ अथवा मनुष्यलोकभन्दा माथिको लोक पितृलोक हो । पुनः ‘विधुध्र्व भागे पितरोवसन्ती’ (सिद्धान्त शिरोमणि) चन्द्रमा भन्दामाथि पितृहरु बस्दछन् । यसरी वेद, उपनिषद् पुराण, स्मृतिशास्त्रले पनि पितृयज्ञको प्रसंशा गरेको पाइन्छ । तसर्थ जबसम्म छोरा जीवित रहन्छन्, तबसम्म पितृयज्ञ गर्नु पर्दछ ।
बाबुको सम्पत्ति छोराले पितृको निमित्त पिण्डपानी नदिईकन आफूमात्र उपभोग गर्दछ भने बुवाको सम्पत्ति चोरी गरेको मानिन्छ । मरेपछि पनि पिण्डपानीकै लागि भनेर आफ्नो छोरालाई सम्पत्ति दिएर गएका हुन्छन् । तसर्थ पिण्डपानी नदिने छोरालाई पितृले श्राप गर्दछन् । जुन श्रापलाई पितृदोष भनेर भनिन्छ । अतः पिण्डपानी नदिने छोरा ब्रह्म राक्षस बन्दछन् ।
पिण्डपानी पितृले कसरी पाउँदछन् ?
छोराले दिएको पिण्डपानीको सूक्ष्म भाग सूर्यले सोसेर, वायुले उडाएर पितृका राजा अर्यमाका खातामा जम्मा हुन्छन् । अर्यमाले मृतकका पितृहरु जुन जुन योनीमा रहेका छन्, तत् तत् चीज बनाएर अर्यमाले चन्द्रमालाई र चन्द्रमाले बादललाई बादलले पानीबाट पु¥याइदिन्छन् ।
पितृलाई प्रिय लाग्ने वस्तु
गाईको दूध, गंगाजल, मौरीको मह, पट्टवस्त्र (पिताम्वर), कालो तिल, छोरीको छोरा (भानिज) कुतुप (श्राद्धको समय) यति सात चिज पितृको प्रिय वस्तु हुन् । यसका अतिरिक्त मासको फुलौरा र गहुँको रोटी पुरी पनि तयार गर्नु पर्दछ ।
श्राद्धमा निषेध वस्तु
भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको द्रव्य, निकृष्ट व्यक्तिसँग लिएको द्रव्य, दुःखी, गरिबको मन दुखाएर वा रुवाएर कमाएको द्रव्य, मानव बेचबिखनजस्तो घृणित कार्य गरेर अथवा कुनै नारीको मन दुखाएर आर्जन गरेको द्रव्य तथा घरमा पितृकार्यको लागि भनेर मागी ल्याएको चिज तथा सिदामा घिरौँला, करेला पनि वर्जित गरिएको छ ।
पितृयज्ञको अर्थ श्राद्ध हो । श्राद्ध गर्ने व्यक्तिले नियमको पालना नगरेमा, पितृमा श्रद्धा भक्ति नदेखाएमा, डर वा करले गर्न परेको ठानेमा वा पितृको अपमान हुने कार्य गरेमा, पितृ रिसाएर जान्छन् जसले गर्दा व्यक्तिको व्यर्थ खर्चमात्र भएन, पितृले श्राप दिनेछन् र दुःख यातना भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
पितृ पक्षमा पितृका राजाले पितृलाई स्वतन्त्र छाडिदिएका हुन्छन् । त्यस कारण पितृहरु आफ्नो तिथिका दिन पिण्डपानीको आशाले बस्दछन् । सायम्सम्म पनि भाग नदिएमा निरास भएर जान्छन् ।